Ireo Feo Avy Amin’ny Tontolon’ny Bilaogy Miteny Kiswahili · Global Voices teny Malagasy
Ireo Feo Avy Amin'ny Tontolon'ny Bilaogy Miteny Kiswahili
Voadika ny 12 Novambra 2017 15:58 GMT
Misy dimy ambin'ny folo ireo mpitoraka bilaogy mavitrika amin'ny teny Kiswahili ary roa tsy mavitrika. Enina ambin'ny folo Tanzaniana ary iray Kenyàna. Mpitoraka bilaogy vaovao maro miteny Kiswahili amin'izao fotoana izao no miasa amin'ny bilaoginy saingy tsy mbola vonona hiseho vahoaka. Ny votoatin-dresaky ny tontolon'ny bilaogy tanzaniana dia ny fanendrena ny Minisitry ny raharaham-bahiny, Jakaya Kikwete, ho mpifaninana ho fidiana ho filoham-pirenena atolotry ny Chama Cha Mapinduzi (CCM), antoko eo amin'ny fitondràna. Hatao amin'ny volana Oktobra amin'ity taona ity (2005 ) ny fifidianana filoham-pirenena.
Niaraka tamin'ny vazivazy maro be, nanaraka ny fizotry ilay fanendrena ireo tanzaniana mpitoraka bilaogy sady nampitovy izany tamin'ny fihibohan'ireo kardinaly farany teo tamin'ny fifidianana ny Papa Benoît XVI. Ampitovian'ireo mpitoraka bilaogy ireo amin'ny ” fihibohana amin'ny fifidianana ny Papa” ny fizotry ny fanendren'ny antoko eo amin'ny fitondrana, ireo mpikambana ao amin'ny komity nasionaly mpanatanteraka no “kardinaly” ary ny foiben'ny antoko any Dodoma no “Lasapely Sistine”.
Inty ny lisitr'ireo Kiswahili mpitoraka bilaogy mavitrika sy tsy mavitrika :
Maitha -n'ny Mawazo na Mawaidha (fomba fijery sy torohevitra) no hany Kiswahili mpitoraka bilaogy avy any Kenyà. Notateriny fa ny drafitra politikan'ny ITC dia tsy miraharaha ny maha-zava-dehibe ny rindrambaiko misokatra ho an'ireo firenena andalam-pandrosoana. Miangavy ny mpamaky azy izy mba hampiasa ny fitaovana fandikàntenin'ny Google mba handikàna ity fehezanteny ity amin'ny teny Espaniola ary avy eo amin'ny teny Anglisy mba hahitana hoe maninona no misy very ny dikanteny amin'ny fandikàna ny : ” mahafinaritra sady tsotra ny nenin'i Aishwarya”.
Anontanian'i Tungaraza avy amin'ny Mwandani ( namana) ny fampiasana ny teny Kiswahili amin'izao fotoana izao amin'ny bilaogy : blogu, blogi, bilogu sady mangataka ireo mpitoraka bilaogy sy Kiswahili mpandahateny izy mba hikaroka teny vaovao izay tsy voatery nindramina tamin'ny teny anglisy : blog. Resahany ny momba ny ho avin'ireo mponina any Diego Garcia, zanatany Anglisy, mitsotra eo anelanelan'i Afrika sy Azia aty amin'ny ranomasimbe Indiana, izay nesorina an-keriny tamin'ny 1960 mba hanamboarana ny làlana ho amin'ny fametrahana ilay toby miaramilan'i Etazonia lehibe indrindra manerantany.
Innocent an'ny Dira Yangu (Ny Fahitako) dia mitantara ny fifidianana filoham-pirenena Tanzaniana hoavy, amin'ny filazany ny fanohanany ny mpifaninana atolotry ny antoko eo amin'ny fitondrana, Jakaya Kikwete.
Manontany i Egidio raha toa ka madio sy mangarahara ny fifidianana ny Papa Benoît XVI !
Kianin'i Reginald ny Vaomiera nasionaly misahana ny fifidianana noho ny fahanginany nandritra ny fampielezankevitra momba fifidianana filoham-pirenena notarihin'ny Filoha Tanzaniana, Benjamin Mkapa, mialoha ny daty ôfisialy voalaza fa hanaovana ny fampielezankevitra.
Tanisain'i Simon an'ny Kona Yangu ny “didy 10″ ho an'ny filohan'i Tanzania manaraka eo.
Miresaka ny maha-zava-dehibe ny Kiswahili any Tanzania i Ramadhani, amin'ny fandraisana anjara amin'ny adihevitra miseho momba ny tokony hahalasa ny Kiswahili ho fiteny hampianarana eny amin'ny ambaratonga ambony.
Manontany tena i Kazonta, fa nahoana i Dodoma, renivohitr'i Tanzania, no tsy manana sekoly fampianarana ambony na dia iray aza.
Idya an'ny Pambazuko (Vao mangiran-dratsy) dia miresaka ny fanambaràna nataon'ny mpanao politika mpanohitra any Tanzania, Augustine Mrema, hoe moramora kokoa ho an'i Osama bin Laden ny nentina tany amin'ny fitsarana noho ny hitondran'ny mpilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena avy amin'ny antoko eo amin'ny fitondrana fanovàna marina ara-tsosialy sy ara-toe-karena eto amin'ny firenena.
Hamafisin'i Bakanja ny maha-zava-dehibe ny fampianarana nentim-paharazan'ireo zokiolona amin'ny fitazonana ny rafitra ara-môraly aty Afrika. Afrikana iray mpitondra fivavahana mitoraka bilaogy amin'ny teny Kiswahili sy Anglisy izy.
Martha, Beatrice, Da Mija, sy Zainab no hany vehivavy mitoraka bilaogy amin'ny teny Kiswahili hatreto. Dingana lehibe no vitan'ireo vehivavy efatra ireo amin'ny fitondràna ny feon'ny vehivavy Afrikana ao amin'ny tontolon'ny bilaogy miteny Kiswahili.
Manontany tena i Martha, nahoana no tsy manana vehivavy atolotra ho filoham-pirenena ny antoko eo amin'ny fitondràna.
Beatrice dia manome sosokevitra fa i Gertrude Mongela, filohan'ny parlemanta Panafrikana, dia lasa tao anatin'ny lisitry ny olona niaraka tamin'ny mpifaninana ho filoham-pirenena natolotry ny antoko eo amin'ny fitondràna, ary farany lasa vehivavy voalohany Filoha lefitr'i Tanzania.
Taterin'i Zainab fa manohana ny fanendrena ny Minisitry ny Raharaham-bahiny, Jakaya Kikwete, ho mpifaninana atolotry ny antoko eo amin'ny fitondrana ny ankamaroan'ny vehivavy. Tsapan-dry zareo mantsy fa izy no mahitsy sy mahakarakara ny momba ny olan'ny vehivavy.
Manoratra ny teny fampidiran'ny lahatsorany voalohany izay mampanantena ny fitantaràny momba ny fiovàn'ny fiarahamonina sy ny sosialy any Amsterdam i Da Mija.
Mponji -n'ny Furahia Maisha Yako (Sitraho ny Fiainanao) sy Onaeli -n'ny Jitambue (Fantaro ny tenanao) dia tsy navitrika intsony hatramin'ny Janoary 2005 sy Jolay 2004.
7 andro izayMozambika